Ujeedada ugu weyn ee koorsadu waa in ardayda lagu baro dabeecadda gaarka ah ee walxaha siyaasadeed iyadoo la siinayo eray bixin, qalab iyo habab lagu aqoonsado, lagu magacaabo, loo kala saaro oo loo saadaaliyo ifafaale siyaasadeed.
Laga bilaabo fikradda awoodda, fikradaha muhiimka ah ee Sayniska Siyaasadeed ayaa kuu soo bandhigi doona: dimuqraadiyadda, nidaamka, siyaasadda, fikirka, iwm.
Sida cutubyadu u socdaan, qaamuus ayaa la abuurayaa oo lagula shaqaynayaa. Dhammaadka koorsadan, waxaad yeelan doontaa ereybixin gaar ah oo u gaar ah edbinta oo aad isweydaarsan doontaa fikradahan. Waxaad aad ugu raaxaysan doontaa inaad kala furfurto wararka iyo samaynta fikradahaaga.
Macalimiintu waxay si joogto ah u wadaagi doonaan aqoontooda iyo falanqayntooda. Fiidiyowyadu waxay sidoo kale ka kooban yihiin jaantusyo badan si ay waxbarashadu u noqoto mid firfircoon.
Waxa kale oo aad fursad u heli doontaa inaad ku tijaabiso aqoontaada su'aalo iyo jimicsiyo kala duwan.
WARARKA: Sannadkan waxaan arki doonaa sida awoodda, jimicsigeeda iyo qaybinteeda ay u saameysay masiibada COVID 19.
Erayada awoodda Diisambar 19, 2021Tranquillus
horeDabeecadda is-dilka: aqoonso oo ka hortag